Ukuhlola iintlobo ezahlukeneyo zoLuthando
Izindlela ezahlukeneyo Sithandana. UKim van Dijk Photography / Getty Izithombe
Funda ngeendlela ezahlukeneyo esizithandayo. Zininzi iintlobo zobudlelwane esabelana ngazo nabanye ngeentsapho, ubuhlobo, abathandekayo kunye novelwano oluqhelekileyo kubantu ngokubanzi. Ukususela ekuthandeni ukuthanda uthando lwentsapho ekuthandeni uthando, lonke uthando lubalulekile kwimpilo nokuphilisa.
Uthando. I-PeskyMonkey / Getty Izithombe
Zithande kuqala! Kuze kube nzima ukuthanda abanye ngokwenene kuya kuba nzima ukuthanda abanye ngokwenene okanye ukutsala uthando kwabanye. Abanye abantu balinganisa uthando lwabo njengento yobugovu okanye uhlobo lwe-narcissism. Uthando lokuzimela aluhlangani nantoni. I-Narcissism yintlupheko yesifo. Ukuzithanda ngokwakho kukuvuma nokwamkela ukungaqwalaselisi ukungafezeki kwakho. Sininzi kakhulu kunamaphutha ethu kunye neempazamo zethu. Abantu bonke bafezekanga ngokupheleleyo kwaye ngenxa yesi sizathu, silapha emhlabeni ukuze sifunde kwaye silwele ukuba ngabantu abangcono. Zithande uze uthande uhambo lwakho lobomi.
Uthando Lwabazalwana. UGhislain & Marie David de Lossy / Getty Izithombe
Uthando lwabazalwana luya kuphinda luhlonipheke. Uthando lomntu okanye umhlobo wakho. Iwa phantsi komthetho wegolide: Yenza kwabanye njengokuba ufuna ukuba abanye bakwenze kuwe:
Ukubonisa imfesane kubani na omazayo.
Ukuthabatha inxaxheba ekuncedeni abanye abanobunzima.
Enye indlela yokwandisa uthando lobuzalwana ngumgama , oku kuthetha ukuvuma unqulo / unkulunkulukazi.
Ukuchithwa kunye neNtshukumo
Guy Ukuchithwa Kwintombazana. UChristopher Futcher / Getty Izithombe
Uyazi ukuba unomvakalelo otyumkileyo ukuba uke wabuya umgca wecala lomnye umntu. Mhlawumbi ubeka umntu kwi-footestal, ecinga ukuba akakwazi ukwenza into engalunganga. Kungaba nombono wokuthi akukho nethuba lokuphinda ufune uthando lwakho ngomntu onjalo.
Ukuchotshoza akusilo uthando, kodwa ngokuqinisekileyo ludideka kwaye luphazamise ngokomzwelo. Kubuhlungu xa ulwalamano lwakho lungabuyiswanga okanye lukhutshwe ngokucacileyo. Akunakukhathazeka ngomnye umntu, naye, ngubani na ongasesikhatyweni esingaxakekiyo sokukuguqula.
Ukugcina ukuchoboza kwakho imfihlelo kukukhuseleka kokuthandana. Ukuchithwa kwidumo okanye omnye umntu ongenakufikeleleka ngokwenene unobomi obuthandayo ubomi bakho engqondweni yakho. Uthando lwakho alusekelwe kwinyani. Unokumkholisa ngokukhuselekileyo umntu osuka kude kwaye ungalimazi. Kulungile ukucinga.
I-Sweet and Adorable Puppy Love
Love Puppy. Cultura / uPimon Simon / Getty Izithombe
Uthando lwe-Puppy luyathandeka kwaye lumnandi. Yilapho iintliziyo ezimbini ezincinci zihamba zihamba zihamba. Uhlobo olungathandekiyo luthando lunomsindo womoya omtsha wasentwasahlobo. Uthando lwe-Puppy luyimpawu ebalulekileyo kwaye engabonakaliyo engaboni mida. Sonke siye apho kwaye nabani na ongakhumbula ukuba ukunyuka kwengqondo e-adrenaline egcwele imvakalelo kunye nenjongo-imemori exabisekileyo. Uthando lwe-Puppy uluthando oluye lwahlukana ngoba lwenzeka ngaphambi kokuba lube neentlungu zentliziyo ephukileyo, okanye intlungu yothando ithandekile.
I-Karma Iingxowa kwi-Heart String
Uthando kunye neNxabano. Rebecca Grabill / Getty Izithombe
Ukudibanisa kweKarmic ngokuqhelekileyo kuqala ngokukhawulela okubambisa abantu ababini. Ukudonsa i-magnetic kuyimfuneko ukuyihlanganisela ukudala ubudlelwane babo obuse-Karma. I-Karma i malunga nokuhlawula kunye nokufunda kwimpazamo yangaphambili. Bambalwa abantu abanokukhetha ukungena nolwalamano nolwazi lwangaphambili lokuba luya kubandakanya ukungqubuzana kunye novavanyo. Amaxesha amaninzi olu lwalamano lubhalwe ngokuthi "uthando-inzondo" ubudlelwane. Abantu ngabanye abanakufumana ngokwaneleyo omnye nomnye ngokuthandana okanye ngesondo, kodwa abaqhelekanga ngokunye. Amaxesha amaninzi, ukufundiswa kweemvakalelo ezinzima zifundiswa kwaye zifundwa ngokubambisana.
Intsebenziswano. Yagi Studio / Getty Izithombe
Uthando lwekhontrakthi lufana noluthando lwekarmic, kodwa kukho ukhetho olungakumbi olubandakanyekileyo kulolu hlobo lokubambisana. Ezi ntsebenziswano, ezibizwa ngokuba yi-Soul Contracts, azifaki ukuba zihlawule iimpazamo zexesha elidlulileyo okanye kwi-kararm boardboard. Ezi zivumelwano zifakwe ngeenjongo ezithile kwingqondo. Kukho ukuqonda kumgangatho owaziyo ngomphefumlo ukuba ukudibanisa kwabo kuya kuncedisana ngandlela-thile. Ubuqabane obambiswano ngokubanzi buxhasano lobuxhasi.
Inhliziyo yokuBhawula. Mihaela Muntean / Getty Izithombe
Ndiyanqikaza ukudibanisa amagama athi "ukunyaniseka" okanye "umlutha" ngothando. Lona alukho uthando. Kulawulo, okanye mhlawumbi kunokwenzeka, ukungabi nako-ukulawula. Ngamanye amaxesha kunzima ukugcina okanye ukuvuselela ubudlelwane obubi kungumkhuba ombi. Unokubanjwa kakhulu kwindawo yakho yangoku ukuba awukwazi ukubona indlela yokuphuma. Ngokudabukisayo, sinokukhululeka kwiintsebenziswano zethu ezinzima kuba baziziva beqhelene.
Abathandi beNkwenkwezi. Tim Robberts / Getty Izithombe
Ngaba uphila ubomi bomntwana? Okanye ulinde ngesineke okanye ngokungapheliyo ngesithembiso "sokuphila ngonaphakade."
Iingxelo ezihambelanayo (ukufundwa kweenkwenkwezi, ukubhaliswa kweembalo, isibalo) kungabonisa iimpawu, iimpawu zomdlalo opheleleyo. Ngaba ucinga ukuba ukuba kwakungekho ngoncedo lwekhayiddi onokuzondla yodwa iminyaka kwaye ungalokothi ufumane umphefumlo wakho? Unina uBessie, umlingane womndeni ongeyena, unokwazi ngokwenene okulungileyo kuwe. Intoni? Ziyintoni na zonke iingxabano malunga nokuba nomntu ophefumulayo? Kutheni uMarine noVenus bengadlala kunye?
IPoly Doll Family. Tetra Izithombe - Vstock LLC / Getty Izithombe
Uthando oluvela kunyoko okanye utata lwakho lubonakala luyintando yokuqala. Kungokwemvelo ukubuyisela uthando kumalungu entsapho onyamekayo. Intsapho iyunithi eziva iyanyanzelekile ukuba inakekele. Yinto yesizwe ... udibana phakathi kwakho kodwa ekugqibeleni uya kuhlangana kunye neqela ukulwa okanye ukuzikhusela nantoni na eminye imikhosi engakwazi ukulimaza.
Ukuba inyunithi yentsapho ingasebenzi, umqondiso wothando unokugqithiswa. Xa abantwana abakhuliswa kwintsapho engasebenziyo bakhula baya kuhanjiswa kwabanye abadidekile ngothando. Kodwa ukuba wenza umsebenzi ongaphakathi ungaphula umzekelo wokwenza ubudlelwane obubi kwaye udale intsapho enempilo kunye nenothando kunye nabantu okhethayo.
Uthando lwentsapho alufuneki ukuba lube ngumngcipheko wegazi. Joyina isizwe esilungeleyo kwaye uqale ukwabelana nothando.
Uthando olunzima. IBarA Muratolu
Uthando olunzima alulona uhlobo lothando, kodwa lube luncedo olukhulu kunabo bonke. Ukuthatha isithintelo sothando olunzima kuyindlela enamandla yokuyenza. Kwakudingeka ukuba uyeke kude nokulawulwa komntu okanye umnqweno wokunceda umntu omthandayo othembekile kakhulu kwiziyobisi okanye utywala. Kwezinye iimeko, akukho kusetyenziswa kakubi kweziyobisi, kodwa xa umntu ongenakukhutshwa asebenzise kakubi iindlela zakho zokunyamekela kufuneka akhankanywe kwi-curb.
Kukhona isifundo kubo bobabini abakwiimeko ezinzima zoLuthando. Umncedi uyafunda ukuba angabanikeli ngokwabo kwaye uya kuvumela omnye umntu ukuba abe nendawo yokuzinceda. Umntu oxhomekeke kuye uboniswa ukuba kufuneka athathe uxanduva lobomi bakhe. Uthando olunzima luyakwazi "ukucima okanye ukubhukuda" kwaye lunokuba yimeko enokukhathaza intliziyo ukunyamezela. Kodwa xa umjezi ephakama ukusuka ekujuleni kokuxhomekeka kwakhe aze abe ngumntu wakhe ngokupheleleyo, kukuphumelela kubo bobabini.
Uthando lufakwe kwiJar. IJordan Parks Photography / Getty Izithombe
Ukuba bekukho uthando olugqibeleleyo lungaba luthando olungenammiselo. Sonke sivile ngohlobo olungathandabuzekiyo kwaye abaninzi bethu bazama ukufumana olu hlobo luthando. Uthando olungenangqiqo lukholo lwesisu kwaye luya kwenzeka ngokwemvelo. Kodwa, kuyinto engokwemvelo ukuba sihambe ngokulandelelana kunye nezigwebo zethu, ukulindela kunye neenjongo ezilungileyo. Akunakufuneka uvume okanye uvumelane nokukhetha komntu othile ukuba umthande ngokungathandabuzekiyo. Yizame. Uthando olungenalo ngumbono luphela.
Isingeniso soLwandle oluNxweme lokuLoba lokuPhepha
Iimviwo zeeNkcazo zeNdalo zabantwana kunye neentsapho
Funda iintlobo ezahlukeneyo zeeNtloko zezityalo
Izigaba ezi-4 zoBomi beMpilobugs
Ngaba i-Sharpie Tattoos Safe?
Quote Kuhn Quotes